Imithetho eyisisekelo yokugqoka ngokubukeka kwedolobha | Amadoda aSitayela
Imithetho eyisisekelo yokugqoka ngokubukeka kwedolobha
U-Ignacio Sala | | Amathrendi
Emhlabeni wemfashini yamadoda singathola inombolo enkulu yezitayela, yize kowesifazane inani liphakeme kakhulu. Ukungathandi kwamadoda kwezemfashini kwaqala ukushintsha ngeminyaka yama-90s lapho amagama afana ne-metrosexual aqala ukuvela futhi ngokushesha aba semfashinini ezingxoxweni zabesifazane. Ngakho-ke, amadoda kudingeke ukuthi aguquke hhayi kuphela endleleni esigqoka ngayo kodwa futhi nasendabeni yokunakekela imizimba yethu.
Ngaphakathi kwezitayela zesilisa singathola labo ababukeka budlabha (akusho ukuhamba nehembe elifanayo esilala ngalo). Sithola nokubukeka kwe-bohemian, okungukuthi kusinikeza ukuthintana kongqondongqondo kanye nokuzijabulisa ngokulingana. Umlingisi uJohnny Deep ku-movie i-The Ninth Door (ngokususelwa kunoveli i-El Club Dumas ka-Arturo Pérez Reverte) uyisibonelo esihle salokhu. Kepha sithola nokubukeka kwe-grunge. Lesi sitayela sibonakala ngamahembe acwebezelayo, amajini acindezelekile namabhuzu ngesitayela esimsulwa sikaKurb Cobain, umculi oshonile odabukisayo othathwa njengobaba wegrunge, uma sikhuluma ngomculo.
Uma sikhuluma ngesitayela esingajwayelekile, sesivele siqala ukukhuluma ngendlela yokugqoka engashiya i-tonic ejwayelekile, ngoba, naphezu kwegama, kuyadingeka inhlanganisela ebukhali yazo zonke izinto eziyingxenye yezingubo zokugqoka. Manje njengoba ama-hipster esheshe aphuma emfashinini, kubonakala sengathi okwesikhashana manje, ukubukeka kwedolobha kubonakala sekuzibeka kabusha, nakho futhi, njengezinye izitayela, okwazalwa kabusha eNew York City.
Ukubukeka kwedolobha kusivumela ukuthi sigqoke amateki, amabhantshi agcwele izikhwama, amajakhethi amabhomu (Banqoba ngeminyaka yama-80s), izingubo ezivamile, amajean adabukile, izikibha ezinemiyalezo nemidwebo, kanye nobumnandi, kuyesabeka. Noma ngubani ofuna ukujabulela ukubukeka kwedolobha akudingeki ukuthi asebenzise imali eningi ngoba kuzofanele bafune ukukhabethe ikhabethe labo kancane ukukhipha zonke lezo zingubo abangasazisebenzisi isikhathi eside.
Vele, ukuze sikwazi ukusebenzisa lokhu kubukeka lapho sigqoka kwasekuqaleni kufanele sibe nesibindi, ngoba kufanele sixube imibala ngaphandle kokuwela ebumnyameni sisebenzisa amajini anokukhanya okuncane ebumnyameni, sebenzisa izingubo ezahlukahlukene ezifana amavesti, izikhafu ngisho nezigqoko.
Khumbula ukuthi ukubukeka kwedolobha akuhlangene nezizwe ezithile zasemadolobheni, njengalezo ezisemfashinini kamuva nje ezibizwa ngokuthi i-swag, igama elisetshenziswa ngabarepha lapho bebeka emavesini abo nokuthi iye yashintsha yaba yinto ehamba phambili kwabanye abantu, ikakhulukazi abantu abasha, uphawu lwabo oluyinhloko ikepisi ebekwe kabi ekhanda ngaphezu kokuhudula izinyawo nomaphi lapho beya khona.
Isici esiyinhloko esimele ukubukeka kwedolobha kuyinduduzo, sishiya eceleni amasudi, amajakethi nezinye izingubo ezisivimbela ukuba sikhululeke kunoma yisiphi isimo. Ngalokhu angisho ukuthi singaphuma nanoma iyiphi ingubo esiyithola ekhabethe lethu kodwa kufanele silandele imithetho eyisisekelo esiyichaza ngezansi.
1 Ukukhetha ikhabethe
2 Iminyaka efanelekile
4 Hhayi ukwenza impilo yakho ibe yinkimbinkimbi
5 Uhlobo lwezindwangu
6 Izembatho zebhrend: hhayi impela
Okokuqala, izingubo ezikhululekile kulula ukuzihlanganisa futhi zigqame ngokulula kwazo. Imibala ivame ukuba ngamasilo okwenza kube lula kakhulu uma kunokwenzeka ukuyihlanganisa nezinye izingubo, into esingeke sikwazi ukuyenza ngokukhululeka okufanayo nezingubo ezinemigqa noma ezihloliwe, eziqondiswe kakhulu kwezinye izitayela ezifana ne-grunge, engishilo ngenhla, ne-Combination yayo nezinye izindwangu nemibala kwesinye isikhathi akunakwenzeka.
Kungaba yinqaba kithi sonke ukubona umuntu osekhulile efake amateki, amajini nejakhethi engadedeleki. Lolu hlobo lokubukeka kwamadolobha aluqondisiwe emphakathini jikelele, kepha kunalokho kuyisici sabantu abasha. Yize kunjalo wonke umuntu angathanda ukugqoka ngokunethezeka, kungahle kungafaneleki eminyakeni ethile. Ngalokhu angisho ukuthi abantu asebekhulile kufanele bagqoke ngendlela ethile, kepha ukuthi bangakwazi ukuzivumelanisa nezinye izitayela ezizobanelisa kangcono kunokubukeka kwedolobha.
Njengoba ngishilo ngenhla, ukubukeka okungajwayelekile kubonakala ngokusinikeza okulula nokushesha lapho ukhetha izingubo esizokusebenzisa emini. Imibala eyisisekelo efana nohlaza okwesibhakabhaka, omnyama nomhlophe kulula kakhulu ukuhlanganisa namathoni akhanyayo. Uma singacaciswanga kahle ukuthi yini ehambisana nalesi sikibha esitelekayo nesigqamile esisithenge ngolunye usuku, kungcono ukukhetha amabhulukwe nejakhethi noma ijezi elinamathoni angathathi hlangothi ukuze uqhathanise nenye ikhabethe.
Hhayi ukwenza impilo yakho ibe yinkimbinkimbi
Ngokusebenzisa izingubo wonke umuntu anazo, lapho sikhetha ukuthi sizogqoka ziphi izingubo esizokuphuma, Isikhathi esizozinikela kulo msebenzi sincane. AmaJeans sihlala sinawo, njengezicathulo zezemidlalo (yize ezethu kungezona ezemidlalo). Konke lokho kuhlangene nehembe elimhlophe nebhantshi lesikhumba elimnyama nakho konke kulungele ukuchitha usuku ungekho ekhaya.
Njengomthetho, ukotini uhlobo oluhle kakhulu lwendwangu Uma kukhulunywa ngokugqoka kakhulu ehlobo lapho ilanga liqala ukuba khona iningi losuku nokushisa kuqala kusenza sijuluke ngaphezu kokujwayelekile. Kangangokunokwenzeka gwema izindwangu ezenziwe nge-polyester noma i-acrylic.
Izembatho zebhrend: hhayi impela
Yize abaningi becabanga ukuthi ukugqoka izingubo zomkhiqizo kuzosenza sigqame ngaphezu kwabo bonke abanye, ngenxa nje yohlobo lomkhiqizo, ukubukeka kwedolobha akusekelwe kulezi zakhiwo kodwa kunalokho. Yize kuliqiniso ukuthi singathenga izingubo zethu ezitolo zezitolo, ezitolo eziku-inthanethi njenge Gcwalisa.net noma singakwenza futhi ezimakethe, lapho kwesinye isikhathi singathola izingubo eziningi ezahlukahlukene ngokuqinisekile ezihambelana nalokho esikuthandayo nezikudingayo uma kukhulunywa ngokugqoka futhi okusivumela nokonga inani elikhulu lemali.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » Imithetho eyisisekelo yokugqoka ngokubukeka kwedolobha
Iqiniso ukuthi ukubukeka emadolobheni kusefeshini. Imfashini yasedolobheni, i-Streetwear iletha isitayela esiningi nokwehlukanisa. Akulula kangako ukuwugqoka futhi uwenze ubukeke umuhle, ngakho okuthunyelwe kanjena kuyasiza kakhulu.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ungazithenga kuphi izingubo zesitayela sasedolobheni ngoba izingubo zibalulekile ukuze uzithole. Isitayela esisodwa esilingana kahle lapha izingubo zokushwibeka.
Izigqoko zokugqoka ukumboza ikhanda ngobuhle
Izikhiye zokufeza ukubukeka okungajwayelekile